Yintoni iBitcoin? | I-CryptoLog
I-Bitcoin yi lwemali yolawulo elektroniki, eyokuqala kuluhlu olude kunye nembali ebalulekileyo kwimbali yezoqoqosho. Umba awukho nzima ukuwuqonda: umntu uqulunqa amathokheni e-elektroniki kwaye awenze afumaneke kuye wonke umntu ngokuwathengisela imali "yesiqhelo" okanye ngokubafundisa ukuba "bangayibeka njani". Ngokomgaqo, konke kuza kule nto: iichips inexabiso abantu abafuna ukubanika lona ngokobonelelo kunye nemfuno. Ezo tokens zekhompyuter zinokusetyenziselwa ukuzitshintshela iimpahla okanye iinkonzo, njengalo naluphi na uhlobo lwemali.
Oku kungasentla yingcaciso elula kodwa umxholo uya phambili ngakumbi. Makhe sibone ezinye zeempawu zayo eziphambili:
IWindows: kuba iBitcoin, ngokomgaqo, ayikho kwinto ebonakalayo. Yonke i-Bitcoin okanye iqhekeza le-Bitcoin ngumtya owahlukileyo wee-byte okanye oonobumba abalandela isoftware esiyibiza ngokuba sisipaji okanye isipaji.
Yabelwe indawo: akukho mzimba uphambili uwukhuphayo okanye uwulawule. Eli nqaku ngokuqinisekileyo linobuchule okoko ngandlela thile idemokrasi ukuba, kude kube ngoku, yayihlala iyinto elawulwa zizinto ezithile okanye abantu abakhethiweyo bezoqoqosho.
Akuncinci-Imigaqo yomdlalo weBitcoin icacile kwaye iyabonakala. Ziya kubakho kuphela Izigidi ezingama-21 zeBitcoin (ayizenzwanga zonke okwangoku). Oku kuthetha ukuba akukho ngaphezulu okanye ngaphantsi kokukhona abantu beyisebenzisa, elona xabiso liya kuba nalo ngokubhekisele kwiimali ezidalwe ngokungenasiphelo njenge-Euro okanye iDola.
Ayintle-Ukudalwa kweBitcoin kwenziwa ngokusombulula i-cryptographic (okanye iingxaki zezibalo, ukuba ukhetha njalo). Yonke intengiselwano ibhalwe kumakhulu okanye kumawaka "eeleja" ezimele ukuba zifane ncam. Ukuba ngobugcisa obuthile ndenza okanye ndigqithisela enye i-Bitcoin engaboniswanga kwezi ncwadi ze-akhawunti zisasazwe kwihlabathi liphela, "i-Bitcoin" yam ayiyi kwamkeleka kwaye, ke ngoko, akunakwenzeka ukuba ndenze eli qhinga.
Bucala- Isipaji sam seBitcoin senza uluhlu lweedilesi zikawonke-wonke apho nabani na anokundithumela khona iimali zemali. Ezo dilesi ziluthotho lweeleta kunye namanani angenakuphindwa. Ezi dilesi zinokwaziwa nakubani na kuba zisebenza kuphela ukuba zindithumelele iBitcoin, ngaphezulu okanye ngaphantsi kwenani leakhawunti yam yokujonga ebhankini. Ngaphandle kokuba ndishicilele eyam idilesi, akukho mntu unokuyazi ukuba yeyam. Ke ngoko, i-Bitcoin ibonelela ngezinga eliphezulu lokuba ngasese nangona kunganyanzelekanga ukuba kungaziwa igama. Kwelinye icala, isipaji seBitcoin sinokuvelisa inani elikhulu leedilesi zonke eziya kuthi zivumele iimali ukuba zifikelele kwisipaji sam. Ngamanye amagama, kunokwenzeka, ukuba uyafuna, ukuvelisa idilesi eyahlukileyo kwintengiselwano nganye, ke ubumfihlo buphezulu ngokumangalisayo.
Segura: Kunzima ukuphulukana neBitcoin yakho nge iindlela ezilula zokhuselo. Ukuba ufunde iindaba malunga nokwebiwa kweBitcoin, ndikucebisa ukuba uqaphele ukuba bonke babhekisa kwii-bitcoins ezigcinwe ngabantu besithathu okanye ukubekwa kweliso elibukhali kwelona manyathelo okhuseleko asisiseko afunekayo ukuphatha isipaji se-elektroniki njengokungagcini ikopi yogcino ngaphakathi indawo ekhuselekileyo okanye ulibale iphasiwedi. Ingxaki yamaphasiwedi alibaleyo ayiqhelekanga, njengoko uyazi, nakweyiphi na indawo yobomi benene kubantu abaninzi. Ukufunda ukusebenzisa ipassword eyomeleleyo kunye nokusebenzisa iindlela zokuzigcina zikhuselekile yinto esele singenayo ngaphakathi. Ngenkcubeko elula ngale ndlela, unokuqiniseka ukuba iBitcoin yakho ayinakuphikiswa kunamaphepha ebhanki owaphatha yonke imihla.
Ebekekileyo: kuba ikhowudi yeBitcoin yi umthombo ovulekileyo wonke umntu unokuphonononga kwaye ngenxa yokuba ukusebenza kwayo kucacile kwaye akunakutshintshwa ngokungalawulekiyo. Intengiselwano inokubonwa nangubani na, nangona, njengoko benditshilo, akukho lula ukulandela ukuba ngubani owenzileyo. Yicinge njengegumbi elikhulu eligcwele iisefu ezincinci ezinendawo encinci. Isisefo ngasinye esincinci sisipaji. Kwelo gumbi kukho iikhamera kuyo yonke indawo. Xa ndifuna ukuthumela i-Bitcoin komnye umntu, wonke umntu angayibona le ndiyenzayo kodwa ingathi bendiyenza ngesigqumathelo esingavumi ukuba ndichongwe. Into ayibonayo wonke umntu kukuba umntu uyangena egumbini, avule isisefo, athathe inani leemali ezibonwa nangubani na, emva koko aye kwesinye isisefo kwaye abeke iinkozo zemali kwislot.
Ayinakulungiswa-Ukuba umntu andithumele iBitcoin, le nkqubo ayinakuphinda ibuye. Oku kuthetha ukuba xa kwenziwe intengiselwano akukho kubuya mva; ngezinye iindlela njengoko siza kubona kumanqaku alandelayo. Okucacileyo kukuba ukuthengiselana kweBitcoin kukhuseleke kakhulu (kwaye kuyakhawuleza) kunokudluliselwa kwebhanki okanye iinkqubo zokuhlawula ezinjengePaypal.
Independiente: uyibhanki yakho. Xa ufaka isipaji seBitcoin akukho mntu wesithathu uyilawulayo, Ngaphandle kweentlobo ezithile zeewallethi ezikwi-Intanethi ezinikezelwa njengenkonzo. Unoxanduva lokugcina ikopi yogcino ekuvumela ukuba uphinde wenze isipaji sakho kwimeko yelahleko okanye ukonakala kwesixhobo se-elektroniki osifakileyo. Mhlawumbi yinto esingayiqhelanga kangako ukusukela kude kube ngoku sibeke ubomi bethu bemali kwiibhanki ezithile. Kodwa le yindawo yokuqhekeka komhlaba. Ukuzimela okunene kunika inqanaba eliphezulu lokhuseleko ukuba siyayiqonda indlela esebenza ngayo.
Njengoko ubona kwinto oyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku, iBitcoin isebenza njengayo nayiphi na enye imali, ukuhambisa isibindi nokuzithemba. Ixabiso kuba iBitcoin nganye inayo, ephezulu okanye esezantsi, xa kuthelekiswa nezinye iimali esisetyenziselwa ukuzisebenzisa njengezinto ekubiza ngazo izinto. Thembela kuba ukuba undinika iBitcoin ndinentembelo yokuba ndiza kuba nakho ukuyisebenzisa ukufumana izinto okanye njengevenkile elula yexabiso; Oko kukuthi, ukuyigcina kwikamva, ndiyathemba ukuba iyaqhubeka inexabiso elindivumelayo ukuba ndilitshintshisele iimpahla okanye iinkonzo.
Ngamafutshane, I-Bitcoin yimali kwaye inokusetyenziswa ngokufanayo nayo nayiphi na enye imali enexabiso elithile.
Kodwa yintoni enika ixabiso leBitcoin?
Sihlala sicinga ukuba iingqekembe okanye imali engamaphepha iyanqweneleka kuba zimele ixabiso elibambekayo. Ngexesha elithile kwimbali yezoqoqosho zehlabathi oku kunokuba kunjalo. Umzekelo, xa iingqekembe zenziwe ngentsimbi ethile enomdla, ingqekembe yona inexabiso esalithi senziwe sisinyithi (umzekelo, igolide okanye isilivere). Emva kwexesha, imali iye yabonisa amaxabiso abonakalayo agcinwe zizinto ezikhutshwa zezi ngqekembe okanye amatyala. Kodwa namhlanje sithetha ngeemali ze-fiat, imali esekwe kwithemba. Indlela eyilwe ngayo imali ihlala ifihlakele kakhulu okanye ubuncinci ingabonakali ekuhleni kubantu abayisebenzisayo. Zingaphi iiYurophu ezikhoyo? Zenziwe njani? Zeziphi iindlela ezisetyenziswayo ukufaka i-Euro kwinkqubo? Ukuba amanye amazwe ayayithemba imali ye-European Union, yonke into iyasebenza, ngaphandle kwento yonke eyenzeka kumsebenzisi oqhelekileyo. Kodwa khawufane ucinge, umzekelo, i-China ayifuni kwamkela iiYuro ezingaphezulu kwaye ifuna ukuba ihlawulwe ngeedola okanye ezinye iimali. Ukuphulukana nokuzithemba kwii-Euro kuya kuthetha ukuwa kwayo. Nge-Bitcoin zonke ezo zinto zixabisekileyo zicace gca kwaye zinokuqondwa ngokulula ngokumba ubunzulu obuncinci, njengoko sisenza ngoku. Ngokwenyani, I-Bitcoin ayibonisi naliphi na ixabiso ngaphandle kwento esifuna ukuyinika yona. Xa i-Bitcoin yayidalwa, ixabiso layo laliphantse libe yi-zero. Oku kwenzeka kwiminyaka nje esi-8 eyadlulayo. Ke abanye abantu abaphambeneyo kakhulu, bebona ukuba kubonakala ngathi yingcinga enomdla, sayifumana loo bitcoin yokuqala. Sikwenzile, mhlawumbi, ngeentloni ukuze kungabikho mntu uyazi ukuba sichitha "imali yokwenyani" ukufumana ububhanxa be-elektroniki. Kodwa ixabiso leBitcoin linikezelwa ngokusetyenziswa kwayo. Ngabantu abakholelwa kuyo kwaye bayisebenzise ukuba bayinike ixabiso. Inkqubo edibanisa phakathi kokucingelwayo kunye nokusetyenziswa kwenyani. Ukuya kuthi ndingayisebenzisa njengevenkile yexabiso kunye nokufumana ezinye izinto, iBitcoin yimali. Njengokuba le ntembelo iyatshintsha kwaye imarike yeBitcoin ingekabi nkulu njengaleyo iphambili yezemali, kuyabonakala ukuba ixabiso lalo lijikeleza ngamanye amaxesha likwenza ngokungazenzisiyo ukuba kungazinzi. Kodwa kwakhona, ukuba ujonga indlela ebiziphethe ngayo kule minyaka isixhenxe, ayikayeki ukwanda.
Ukunyuka nokuphakama kokuphindaphindeka kuye kwabanezimbalwa, nangona ixesha ngalinye ixabiso lazo liye lenyuka laze lawa kabukhali, bekusoloko kungaphezulu kwamaxabiso angaphambili. Kusengqiqweni oko; Khumbula, yimali enqabileyo: kuya kubakho izigidi ezingama-21 zeBitcoin kwaye, ngaphandle kwayo yonke into, ezinye ziya kube zilahlekile apha endleleni. Ngamanye amagama, abantu banomdla ngakumbi kwi-Bitcoin ixabiso layo liya kuhlala likhula ngakumbi nangakumbi. Inokuba yintoni isilingi? Akukho mntu unokuxela. Ukuba kwiminyaka esi-8 eyadlulayo yayiphantse ibe yi-zero kwaye ngoku inokuba malunga ne-10.000 euros, kunzima ukwazi ukuba leliphi inqanaba eliya kuba kwiminyaka emi-5 ukusukela ngoku.
Ngaba kufuneka utyalomali kwiBitcoin?
Ngokoluvo lwam ixabiso lokwenyani le Bitcoin liya kusekelwa kuyo ukwazi ukuyisebenzisa njengemali. Kodwa ukuba luncedo kwayo akunakuyekiswa nako njengevenkile yexabiso. Ewe kunjalo, kuyasebenza ngakumbi kunokugcina imivalo yegolide okanye ingqokelela exabisekileyo yezitampu. Isenokungabi intle okanye into onokuyixabisa njengobuncwane kodwa ngokuqinisekileyo ixabisekile. Njengalo lonke utyalomali ebomini, inendawo yayo yomngcipheko. Ukuba ucinga ngako, unokucinga iintlekele eziliwaka. Kodwa imivalo yakho yegolide inokubiwa, okanye nokugcinwa okukhulu kwegolide kunokufunyanwa kwaye ixabiso lalo liyehla kakhulu. Kwaye ukuba sicinga iintlekele ezinkulu, imeko yehlabathi inokuba nzima (nangaphezulu) kwaye igolide iyeke ukuba yinto enomdla. Izitampu zokuposa, kwelinye icala, zinokuba semngciphekweni weengozi ezininzi.
Ngayiphi na imeko, unokucinga ukuba intlekele yehlabathi inokwenza i-Intanethi inyamalale kwaye, ngenxa yoko, ithuba lokusebenzisa iBitcoin. Kwimeko apho, kungcono ukuba unawo umhlaba wokulima imifuno. Andazi, uloyiko alusoze luphele kuwe kodwa, okwangoku, I-Bitcoin ibonakala njengexabiso elikhuselekileyo ukuba ulungelelanise ngokuchanekileyo iimpawu zayo ezisisiseko. Kuyinyani, kuya kuhlala kukho amabali athi okothusa okwethutyana kwiimarike eziguqukayo; kodwa ezo azindichaphazeli. I-Bitcoin iphantse ibe luphawu oluxabisekileyo, njengeCoca Cola okanye iNike. Kubonakala ngathi kuya kuba nzima kuye ukuyeka ukubakho kwiminyaka ezayo.
Kodwa ndicinga ukuba liphelile ixesha lokutyala imali kwiBitcoin
Alize lihambe ixesha ukuba ulonwabo lulungile. Xa i-Bitcoin ixabisa i-euro ezingama-100 abantu abaninzi Ndacinga ukuba sele ndilahlekile kuloliwe kwaye iBitcoin ezimbalwa yayingasafanelekanga ukuba nayo. Emva kwayo yonke loo nto, ixabiso lalibonakala liphezulu kakhulu. Akukaze kunethe kakhulu ukusukela ngoko; hayi kuphela ngenxa yembalela kodwa ngenxa yokuba bekungekho kudala kangako. Mhlawumbi abantu abaninzi abanakucinga ngokufumana iBitcoin kodwa kuba iqhezu ukuya kuthi ga kwikhulu lesigidi, amaqhezu anokufunyanwa nangaliphi na ixesha. Ukuba awunakho ukuba nebha yegolide ngekhilogram enye, ungasoloko uthenga iigram ezimbalwa.
Kwaye kuthekani ngezinye iimali ezisemthethweni?
Emva kweBitcoin, abanye abaninzi baye bafika. I-Bitcoin ibe sisiqalo, indalo ekrelekrele ethi, ekubeni ingumthombo ovulekileyo, ivumele umbono kunye nekhowudi ngokwayo ukuba isetyenziselwe ukuphuhlisa ukwahluka. Abanye babo ngokuphandle umdla kakhulu. Okwangoku kukho amawaka (ngokoqobo) eemali ezisasazwayo zekhompyuter. Ezinye zazo zisetyenziswa njengemali kwaye ezinye zisisiseko seeprojekthi ezinomdla. Kukho ezizidenge kakhulu; abanye bade bazalwa njengohlobo lokuqhula kodwa, uyazi, abantu ngabo babanika ixabiso labo. Kukho iimali ezingathandabuzekiyo eziphuculiweyo kwiBitcoin, kodwa azidumanga okwangoku. Ikamva likhangeleka liqaqambile nangona kukho isiphithiphithi sokubona zininzi kakhulu. Ukuba kude kube ngoku bekunzima kuwe ukwamkela umxholo weBitcoin kwaye, ndiyathemba, ukuba ukusukela namhlanje uyicacisile, ubone ezinye ezininzi (iLitecoin, Monero, I-Dash, Ether, Faircoin, Dogecoin ...) inokubangela nesiyezi. Kodwa ungakhathazeki, phantse zonke ziiprojekthi ezinomdla kwaye ayimbalwa esele isebenza kubomi bokwenyani. Kuya kufuneka siziqhelanise nayo. Inyani yile yokuba uninzi lwazo ziya kusetyenziswa ngakumbi nangakumbi kwaye zilapha ukuze zihlale. Mhlawumbi olu luvo lwesiphithiphithi luya kusonjululwa ngeendlela ezahlukeneyo. Kwelinye icala, abantu baya kuthi ngokuzolileyo baqonde ukuba singazisebenzisa ezininzi zazo. Njengokuba umntu efaka iWhatsApp kunye neTelegram kunye nezinye ii -apps, ukuba nezipaji ezininzi akuyongxaki; okanye usebenzise enye ekuvumela ukuba ube neengqekembe ezininzi ngaxeshanye. Kwangelo xesha, kukho iinkonzo ezenza kube lula ukuhlawula nokuqokelela kwiintlobo ezahlukeneyo zeemali kunye nokwenza utshintsho "kubhabho" ukuze ivenkile ifumane imali eyifunayo nokuba yeyiphi na umthengi ahlawule ngayo. Zininzi izisombululo kodwa, ngaphezulu kwako konke, kukho amandla omntu angenasiphelo okuziqhelanisa notshintsho nokuba lwenzeka ngendlela etyhafisayo.
Ngandlela thile konke oku kuyakufuneka kulawulwe
I-Bitcoin ivule iminyango kulwandle lwezinto ezixhalabisayo kwimibutho nakwamazwe, kude kube ngoku, Baye bodwa kwimali. Akukho mntu wayenokucinga kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuba iBitcoin nayo yonke into esele ivele iyakuba yimpumelelo. Ithuba lokusebenzisa imali eyabelweyo yenza kube lula kubantu abaninzi ukuba bayeke ukuhlawula irhafu. Kwaye, ndithembe, lo ngumcimbi onzima ukusombulula. Kube lixesha elide ukusukela oko bekusiliwa ngokuchasene nokuqhekezwa kwaye kude kube ngoku akukho sisombululo sisebenzayo. Amaqumrhu afuna ukulawula kunye / okanye ukuthintela ngokubanzi ahamba amanyathelo amaninzi ukusuka kubukrelekrele obuhlangeneyo emva kweembono zomthombo ovulekileyo.
Kwelinye icala, kunokwenzeka misela imimiselo kwiinkampani ezibonelela ngeenkonzo ezinxulumene neBitcoin Ngokutsho kweenkampani ezichaziweyo zibekwe ngokwasemzimbeni nakwizemali. Kodwa oku kubonisa inxalenye encinci yomcimbi. Umzekelo, unokuzama ukulawula umsebenzi wezindlu zotshintshiselwano ezikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iBitcoin kunye nezinye izinto ezigcina imali ngokufuna ukuba abasebenzisi bazo bachongwe ngokupheleleyo. Kodwa oku kuyakuchaphazela ezo nkampani zindlunkulu zazo zikumazwe athile. Ngeli xesha, abanye bavela kwiindawo ezinomthetho ongakhathaliyo okanye ovumelekileyo. Ukongeza, ukuvela kweemarike okanye ukutshintshiselana okwabelwe kwiindawo ezo kungenzeki ukuba kube nzima okanye kube nzima njengoko iinkonzo zotshintshiselwano ngefayile p2p esekwe kwiTorrent kunye nezinye iiprotocol zisondele.
Injalo Akunakwenzeka ukulawula ukuthengiselana okwenziwe kwisipaji somntu omnye komnye umntu. Ke, imizimba yolawulo inendlela ende ekufuneka ihanjiwe ngelixa ukuveliswa kweendlela ezintsha kunye neenkqubo zihamba ngokukhawuleza okukhulu.
Ukusebenzisa i-Bitcoin akuthethi ukuba izinto zenziwa ngaphandle komthetho. Ukuba umntu ufuna ukubhengeza ingeniso yakhe ngezezimali ze-elektroniki okanye abhengeze ukwanda kwe-equity ngenxa yokunyuka kwexabiso lemali edijithali anayo, angenza njalo ngokulula. Ukuba ne-Bitcoin kufana nokuba nesiqwenga somhlaba okanye ubuninzi beempahla zexabiso. Njengokuba ixabiso lalo lisanda ungabhengeza, njengommi olungileyo, inzuzo eyinkunzi. Nangona kunjalo, kuyinyani, awungekhe ubhengeze konke oko ... esele ifuna uthotho lwamaqhinga obunjineli kwezemali ukuguqula imali yakho ye-elektroniki ibe yimali ye-fiat. Ewe kunjalo, ukuba awudingi ukuzitshintshela kwii-Euro okanye iiDola kwaye ungazisebenzisa kubomi obuqhelekileyo, isilingo sokugcina imfihlo sinokuba sihle.
Ngaba kuyinyani ukuba iBitcoin isetyenziselwa ulwaphulo-mthetho?
Kuxhomekeka kwinto eqondwa zizenzo zolwaphulo-mthetho. Ngaba ungamhlawula umbulali ngeBitcoin, uthenge izixhobo, iziyobisi okanye ufumane imali? Ulungile. Yinkozo leyo. Kuba yahlukile kwi-Euro, esingadli ngokuzibuza ngayo la mathandabuzo akhoyo. Ukuba ndiqesha umbulali kwaye ndamkela iBitcoin njengentlawulo, kuyacaca ukuba ndingayenza. Kodwa ukuba ufuna ibrifkheyisi ngeeYuro, nayo. Ngapha koko, ngokuqinisekileyo kuxhaphake kakhulu (kude) ukuba izenzo zolwaphulo-mthetho zixhaswe ngeemali ezifana nezo uziphethe epokothweni.
Isizathu sokuba iindaba ezininzi ezimbi zibonakale, ngale ndlela, malunga neBitcoin ayinakuba yenye ngaphandle isidingo sokoyika malunga nokusetyenziswa kwayo. Khumbula, i-Bitcoin yingxaki enkulu kwabo babenegunya kwimali kude kube ngoku. Uninzi lwamajelo osasazo ngamalungu e-propaganda asetyenziselwa ukuzama ukugcina izinto njengoko zazinjalo kude kube ngoku. Kodwa impikiswano engenaloyiko iyawa ukuba ucinga ukuba zingaphi izenzo zolwaphulo-mthetho ezixhaswa ngemali ngamanqaku e-Euro. Ukusetyenziswa kwezimali ze-elektroniki ezisasazwayo kwizenzo zolwaphulo-mthetho ayisiyongxaki inxulumene ngqo nazo kodwa kunoko inyani yokuba ulwaphulo-mthetho lukhona. Ukuba ulwaphulo-mthetho aluhlawulwa ngeeYuro, iiDola okanye iBitcoin, lunokuhlawulwa ngoncedo, olunganyanzelisi ukuba kuthengiswe isixhobo semafiya. Ngesizathu esinye, into yokuba ukutya kuqikelelwa ukuba kukwaphula umthetho (okwenza abantu abaninzi balambe okanye baphile kabuhlungu) ayikwenzi oko kutya kube kukutya kolwaphulo-mthetho.
Intlalontle kunye nezoqoqosho zeBitcoin
Ukuba sikhetha umbono oqinisekileyo, i-Bitcoin ibandakanya uthotho lwe izibonelelo zabantu abaqhelekileyo. Umzekelo:
Se thintela iifizi kunye neekhomishini yokonga imali kwiibhanki.
Iindleko zentengiselwano nganye (yokuhambisa) imali isuka kwenye indawo iye kwenye iya kuba (ngokucinga, kuya kufuneka sijongane nalo mba ngokunzulu) isezantsi kakhulu.
Iintlawulo kunye nokuqokelelwa kwiBitcoin kuya kuba ngokukhawuleza okukhulu. Umbono kukuba babephantse babekho ngoko nangoko; emva koko inyani yahlukile kodwa ngenxa yokuba zikwakhona iinketho ezininzi kwiimali ze-elektroniki. Eyona nto icace gca kukuba ukuthumela imali ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ngokuhambisa ngocingo kubonakala kancinci kancinci.
Kukhuseleke kakhulu ukuhamba neBitcoin kunokuba uphathe i-wad yamatyala epokothweni.
Ukugcina imali oyongileyo kulula kakhulu kunye neBitcoin. Ngokuqinisekileyo, nangona ndiqonda ukuba kukho abantu abasakholelwa ukuba iibhanki zininzi ngakumbi.
Iimali zeBitcoin zezi Ukhuseleko kuma-akhawunti kunye neepeni zemali.
Ukuba uhlala kwimeko enzima, iBitcoin abanakuhluthwa kuwe.
I-Bitcoin iya kunyuka kakhulu ngexabiso ngokuhamba kwexesha. Ukuba ugcina iiYuro phantsi komatrasi emva kweenyanga ezimbalwa uya kuthenga izinto ezingaphantsi ngazo.
Ndiyathemba ukuba ndinayo icacise ezinye iikhonsepthi malunga neBitcoin kweli nqaku kodwa siza kungena nzulu kupapasho olulandelayo. Ndiyakholelwa ukuba kubaluleke kakhulu ukuba singayeki ukwazi nzulu olu dubulo lobuchule bezemali nezoqoqosho obusinikwa ziimali zekhompyuter. I-Bitcoin sisiqalo sohambo olunomdla ngokwenene.
1 Yintoni i-Bitcoin?
2 Kodwa yintoni enika ixabiso leBitcoin?
3 Ngaba kufuneka utyalomali kwiBitcoin?
4 Kodwa ndicinga ukuba liphelile ixesha lokutyala imali kwiBitcoin
5 Kwaye kuthekani ngezinye iimali ezisemthethweni?
6 Ngandlela thile konke oku kuyakufuneka kulawulwe
7 Ngaba kuyinyani ukuba iBitcoin isetyenziselwa ulwaphulo-mthetho?
8 Intlalontle kunye nezoqoqosho zeBitcoin